Tartan Aqoomeed Loo Qabtay Ardayda Dugsiyada MMJ - Cakaara News
Tartan Aqoomeed Loo Qabtay Ardayda Dugsiyada MMJ
Jigjiga(cakaaranews)Axad 16ka April 2017. Tartan balaadhan oo uu soo agaasimay xafiiska waxbarashada Maamulka magaalada Jigjiga islamarkaana ay kasooqaybgaleen ardayda dugsiyada oo laga soo kala xulay 29 dugsi oo isugujira dugsiyada hoose, dugsiyada hoose/dhexe, dugsiyada sare iyo dugsiyada preparatory ga ayaa si habsamileh uga bilowday magaalada jigjiga.
Hadaba, tartankan ayaa waxaa furitaankiisii kahdlay madaxa xafiiska maayorka MMJ mudane Cabdicasiis Mahad oo sheegay in tartankan u jeedadiisu tahay mid lagu dhiirigalinayo ardayda dugsiyada maamulka magaalada jigjiga iyadoo kor loogu qaadayo aqoonta iyo tayada waxbarashada ee dugsiyada. Wuxuuna xusay inutartankani uu noqon doono mid ardaydu ay kaheli doonaan faa’iido badan oo dhanka culuumta sayniska ah.
Sidookale, madaxa xafiiska waxbarashada Maamulka Magaalada Jigjiga mudane Cabdinaasir Cadhays oo isna furitaankii taratankan kahadlay ayaa sheegay in tartankani uu yahay mid sanadwalba xiligan oo kale ay qabtaan islamarkaana ay kutartansiiyaan aradyda dugsiyada. Wuxuuna xusay in tartankani uu socon doono mudo bil ah.
Madax xafiiseedka oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in tartankani uu kusalaysan yahay dhamaan casharada dugsiyada islamarkaana ardayda koobaad, labaad iyo sadexaad kalagala la abaal marindoono. Si ardayda kale iyo iyaguba ugu sii dhiiiradaan waxbarashada natiijo waxku ool ahna u keenaan.
Ugudanbayna ardayda tartamayaasha ah ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin tartankan islamarkaana ay u mahadcelinayaan xafiiska waxbarashada iyo waliba dhamaan maamulka Magaalada jigjiga.